Van Ceu Awi A Damlo Ngai Caah Siizung Ah A Um, Bawmtu Le Pehtlaih Ding Minung An Theih Hna Lo – Chin 11 News
Van Ceu Awi A Damlo Ngai Caah Siizung Ah A Um, Bawmtu Le Pehtlaih Ding Minung An Theih Hna Lo
Bawmh Halnak! (မေတ္တာရပ်ခံချက်)
Malaysia ahaum mi hna nih khuaruat kho deuh zaanghlei cawi kho deuh mi nih rak chuah hnawh hram uh. A tanglei kan rak langhtermi hmanthlakamin Van Ceu Awi (UNHCR reg: 791-05C80658) hiadam lo ii atu hi siizung ahaum. Aho hmanh pehtlaih awk/ bawmtuangei lo tiin UNHCR nih thawng an kan thanh. Cu caah,achungkhat maw,akhuami, amahatheimi nan um sual ahcun CRC zungah rak kan pehtlai hram uh tiah zaangfah kan in nawl hna.
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ပြသထားသည့်လူကို ဆေးရုံတွင် တင်ထားသည်။ UNHCR မှ သူ၌မည်သည့်ဆွေမျိုး နှင့် အုပ်ထိန်းသူမှမရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးခဲ့သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို သိသူမည်သူရှိပါ စီအာရ်စီရုံးသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပေးပါ။
အောကျဖျောပွပါပုံတှငျ ပွသထားသညျ့လူကို ဆေးရုံတှငျ တငျထားသညျ။ UNHCR မှ သူ၌မညျသညျ့ဆှမြေိုး နှငျ့ အုပျထိနျးသူမှမရှိကွောငျး ကြှနျုပျတို့အား အသိပေးခဲ့သညျ။ ဤပုဂ်ဂိုလျကို သိသူမညျသူရှိပါ စီအာရျစီရုံးသို့ ခကျြခငျြးဆကျသှယျပေးပါ။
CRC hotline: 016-697 8568
CRC Office: 03-21100876